jeudi, 03 octobre 2019 08:12
Ao anatin'ny mangarahara tanteraka no hanatontosana ny tolobidy momba ny fanafaran'ny JIRAMA solika, araka ny fanambarana navoakan'ny Ministeran'ny Angovo, ny Rano sy ny Akoranafo. Tolobidy iraisam-pirenena no hanatanterahana izany, hoy hatrany ny fanambarana.
Tafiditra ao anatin'ny drafitra fanarenana ny orinasam-panjakana JIRAMA izao fepetra izao.
Nandritra ny filankevitry ny minisitra tamin'ny 11 septambra 2019 no nanomezana alalana an'ny JIRAMA hividy avy hatrany, tsy mandalo tsenam-barotra ny solika ampiasainy. Ny fepetra dia mila ampahafantarina mialoha ny Filoham-pirenena sy ny lehiben’ny governemanta ny fanatanterahana izany, izay ao anatin’ny fotoana voafetra ihany.
Nampahafantatra ny fisiany sy ny vinam-piarahamoniny ny antoko Tia Tanindrazana ny alarobia 2 oktobra 2019, nandritra ny hetsika nataony tao amin'ny Le Pavé Antaninarenina Antananarivo.
Miditra an-tsehatra lalindalina kokoa amin’ny raharaham-pirenena ny Tia Tanindrazana ankehitriny, hoy Ramanantsoa Schall, Sekretera jeneralin'ny antoko.
Manana ny vinam-pampandrosoana mazava ny Tia Tanindrazana, izay mifototra amin’ny Fanabeazana, ny Fitsinjaram-pahefana tena izy ary ny Teknolojia, araka ny famelabelarana nataon'i Tahina Razafinjoelina, filoha nasionalin'ny antoko.